Global Voices teny Malagasy » Masoandro mihiratra ho an’ny kilemaina any RDC · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Mey 2009 13:33 GMT 1	 · Mpanoratra Katharine Ganly Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: R.D. Kongo, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Tsy ialam-pahasarotana ny fiainan'ny olona manan-kilema sy maleny any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kôngô. Maro ny fahasahiranana atrehin'ny kilemaina noho ny fahabangan'ny fanohanan'ny fanjakana sy ny fahavitsian'ny asa.
Miezaka ny mitatitra matetika ny fiainan'ny kilemaina sy ny malemy ao amin'ny fienena misy azy ny mpanao gazety kôngôley sady miandraikitra ny Congoblog “Ba Leki”  Atoa Cédric Kalonji, tsy noho ny fanamby atrehin'izy ireo ihany fa hanasongadinana ihany koa ny fikirizana sy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo miatrika ny fahasahiranana.
Taterin'ny Congoblog tahatahaka izao ny mombamomba an'i Mariam Mapoyi , vehivavy malemy avy ao Lubanga:
“Ataoko avokoa izay rehetra azoko atao hiantohana farafaharatsiny ny ain'ny zanako nefa tsy mora izany… Mifoha amin'ny enina isa-maraina aho ary mandray ny lakana hiampitana ny ony mba hangataka any amin'ny mpivarotra, mpandraharaha na mpanao politika. Manaraka ahy ny zanako fa tsy maintsy manosika ny bisikiletako ary miara-mihinana amiko izay omen'ny olona ahy.”
Nampian'ny Congoblog ny fitantarany :
Izay tsy nolazain-dravehivavy dia tsy misy mankany an-tsekoly ny zanany telo. Tsy hain'izy ireo na ny mamaky teny na ny manoratra. Fantany tsara fa maizina ny hoavin'ny zanany nefa tsy afa-manoatra izy eto amin'ity firenena tsy maintsy andoavan'ny ray aman-dreny ny saram-pianarana ity, efa niala andraikitra ampolony taona maro izay ny fanjakana. Nefa dia voasoratra mazava ao amin'ny Lalapanorenana fa maimaipoana sady tsy maintsy atao ny fianarana fanabeazana fototra.
Na izany aza dia tsy very fanantenana i Mariam sy ireo mitovitovy fahavoazana aminy, ka miditra dingana hialana amin'ny ranomodin'ny fangatahana izy ireo mba hahazaka tena. Nisoratra anarana tao amina tobim-panofanana iray izy hianatra hanjaitra. Mbola mangataka izy mandritra ny fotoana ianarany saingy manatena fa hahay hampiasa milina fanjairana izy rehefa vita avokoa ny lesona ianarana, dia hahavita tena ka mety hanana ambim-bava aza handefasana ny zanany hianatra.
Amina firenena voafetra moa ny tolotr'asa farafahatsarany, -ary tsy manery ny hidirana amina birao na sampan-draharaham-panjakana ny lalàna, izay mampihena ny fahafahan'ny olona tahaka an'i Mariam manao zavatra,- dia ny mianatra manjaitra na manao asa-tanana hafa no fomba ataon'ny kilemaina Kôngôley manana fahaleovantena tsy mandalo amin'ny fitseran'ny hafa.
Vao tsy ela akory izay tamin'ity taona ity no namoahan'ny ITNewsAfrica  ny antsipirian'ny fahombiazana azon'ny vondrona vehivavy kilemaina nanangana fandraharahana misahana ny zavakanto sy asatanana, izay nantsoiny hoe Asatanana Shona.
Najoro tao Goma niaraka tamin'ny fanampian'ilay Amerikana Dawn Hurley ny Asatanana Shona, ary hatramin'izay dia nitombo sy nihanitombina ny fidiram-bolan'ireo vehivavy tao anatiny.
Namorona sy nivarotra tamin'ny alalan'ny vohikalany  karazan'akanjo, poketra, harona ary kanonkanona nataon-tanana ireto vehivavy ireto. Nahita fahombiazana avy hatrany tany USA, fa nahavarotra vokatra nihoatra ny 100 tamin'ny alalan'ny ebay fotsiny, ny vokatr'izy ireo izay aoka holazana fa lasan-dry zareo manontolo ny tombom-barotra avy amin'izany. Izao fahombiazana izao no ohatra mivaingana amin'ny vokatsoa azo avy amin'ny aterineto mampifandray miantana ny kaontinanta samihafa.
Taona vitsivitsy izay dia maro ny ezaka fananganana toeram-panofanana sy fanabeazana tahatahaka ny an'i Asatanana Shona izao. Tamin'ny volana Aogositra 2008, no nananganana toeram-panofanana voalohany ho an'ny moana marenina, nantsoina hoe Espoir des sourds (Fanantenan'ny marenina) tany Kisangani. Nanome fanofanana fanjairana sy fandrafetana ho an'ny moana marenina monina any Kisangani ny toeram-panofanana, ary nampidiriny ho ao anatin'ny taranja ianarana ihany koa ny fampiasana solosaina (mpanoabaiko).
Manome fitaovana ho an'izay manantalenta moa ny toeram-panofanana tahaka itony mba hahafahan'izy ireny ho tafiditra tsara ao anatin'ny fiaraha-monina. Ary izany dia mba tsy hijerena azy ireo ho vesatra, mpitranga matetika, araka izay voalazan'i Ernst Mukuli, mitatitra ao amin'ny Syfia-Grands-Lacs ,
Miova ny fijerin'ny fiaraha-monina azy ireo raha vao mianatra asa ny kilemaina.
Voatatitra fa nanao izay tratran'ny ainy tamin'ny fampiasana aterineto tany amin'ny cybercafé tany Kisangany tokoa ny mpianatra ao amin'ny Espoir des sourds hahafahany mifandray amin'ny fikambanan'ny moana marenina sy ireo moana marenina hafa ary ireo fikambanana mpanohana manerana ny tany.
Tamin'ny volana marsa 2009 dia nahazo vola manakaiky ny £500 000 ny Handicap International UK hananganana tetikasam-panabeazana any RDC. Telo taona no hampiasana ity tetikasa ity hampidirana ireo ankizy manan-kilema any amin'ny fanabeazana fototra. Atao amin'ny alalan'ny fampidirana ireo ankizy manan-kilema any amin'ny sekolim-panjakana sy fampiofanana ny mpampianatra ny fomba vaovao mifandraika amin'ny fampianarana ireo ankizy manan-kilema ireo. Ny tanjon'ny Handicap International UK koa dia ny hampidirana politikam-pampianarana telo vaovao mifandraika amin'ny zon'ny ankizy manan-kilema any amin'ny minisiteran'ny fampianarana.
Ankoatra ny fanohizana ny fampianarana sy ny fampiofanana, dia maro amin'ny manan-kilema Kôngôley no mahita fomba fitadiavam-bola tsy miankina amin'ny fangatahana.
Hatramin'ny taona 1970 moa dia tsy mandoa hetra ny manan-kilema any RDC. Io no mahatonga ireo kilemaina Kôngôley mitady fomba marosamihafa amin'ny fampiasana ny seza misy kodiarana fitondrany. Congoblog no mitatitra  :
Mitondra ny entambarotra (lafarinina, menaka, trondro na hena) eo ambonin'ny seza misy kodiarana no ataon'izy ireo rehefa hiampitana. Ampitondrain'ny mpivarotra ny kilemaina ny entana satria tsy mandoa hetra ireo. Tsy savaina izay entiny ary tsy mila antontan-taratasy izy ireo rehefa hiampita sisintany.
Kely kokoa noho izay tokony aloany no omen'ny mpivarotra amin'ny fitondran'ny kilemaina ny entany, ary dia afa-miasa malalaka, sady mahazo karama azoazo ihany ry zareo amin'izany.
Nanampy i Congoblog:
Fahabangan'ny vola tokony hiditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana nefa hitan'ny manan-kilema kosa ho fomba ahafahan'izy ireo miahy ny fiainany. “Aleonay miasa eto toy izay mandany andro mangataka any an-tanàna” hoy i Patrick nitraka. Fantatry ry zalahy fa aleo mitsikaraka, toy izay miandry ny fanarenana ny toe-draharaha politika sy toe-karem-pirenena izay mety tsy ho avy akory.
Ireo mirahalahy zokiny indrindra ao amin'ny tarika kôngôley manan-kilema mpihira avy ao Kinshasa Staff Benda Bilili , moa dia nifanena tamin'ny alalan'itony fampitana entana mampitohy an'i Kinshasa sy Brazzaville itony.
Nasongadin'ny bolongan-kira avy ao Marseille KoToNTeeJ  moa ny votoatin-kiran'izy ireo:
Coco Ngambali, mapmoron-kira fototra sady tompondakan'ny fifanandrinan-tsandry, no nanazavany fa manao ny asan'ny mpanao gazety ry zareo amin'ny alalan'ny hira, miresaka ireo izay miaina sy matory amoron-dalana sy anaty baoritra.
Mamerin-kira any amin'ny zaridaina fijerena biby any Kinshasa ny Staff Benda Bilili ary mihira any amin'ny bars sy toeram-pihaonan'ny vazaha any, manana ny letan'ny “success story” na tantaram-pahombiazana tokoa ny ataon'izy ireo. Voadingan'izy ireo avokoa ny karazan-tsakasakana rehetra ary mitarika amin'ny filaharana ao amin'ny World Music Chart any Eoropa amin'izao fotoana izao. Nanao soniam-piaraha-miasa amin'ny Crammed Discs moa ny Staff Benda Bilili ary miomana ny hitety an'i Eoropa.
Raha porofon'ny fiasana mafy sy fiasana tsara ary ny fahavononana moa ny fahombiazan'ny Asatanana Shona sy ny Staff Benda Bilili, dia nanam-bintana ihany koa ny famoronana nataon'izy ireo. Tsy tokony hohadinoina fa na dia eo aza ny ezaka dia hatrehina hatrany ny kilema sy ny fiainana sarotra.
Araka ny fanamarihan'i Congoblog:
Raha sarotra ho an'ny olona salama tsara ny fiainana, tsy ilaina akory ny manontany ela ireo izay manana fahasarotana (kilema). Ary maza loatra fa tsy misy na inona na inona azo antenaina amin'ny fanjakana miala andraikitra sy tsy mahalala izay tokony ataony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/20/2339/
 Congoblog “Ba Leki”: http://www.congoblog.net/
 Mariam Mapoyi: http://www.congoblog.net/kisangani-mendicite-pauvrete-et-precarite-quotidien-dune-femme-handicape/
 no mitatitra: http://www.congoblog.net/les-personnes-handicapees-dans-l%E2%80%99article-15/
 Staff Benda Bilili: http://www.crammed.be/staffbendabilili/
 Katharine Ganly: https://globalvoicesonline.org/author/katharine-ganly/